Weelka 'plug'n'play' > Vielhuber David
npm waa maareeyaha xirmada aasaasiga ah ee Node.js. Facebook muddo dheer ayuu soo waday xal kale oo lagu maareeyo xirmooyinka loo yaqaan Yarn . Yarn waxay umuuqataa inay si tartiib tartiib ah uga sii lumeyso aqrinta Github sida xalka caadiga ah iyo tirooyinka ku yaal goobta rasmiga ah waxay muujinayaan in kaliya qeyb ka mid ah xirmooyinka ay fulisay Yarn. Si kastaba ha noqotee, waxaa habboon in laga fekero banaanka xerada.
Yarnku wuxuu si buuxda ula jaan qaadayaa faylasha hadda jira ee package.json - markaa waad u isticmaali kartaa labada xalalba mashruucyada jira wax dhibaato ah. Amarada labada xal waxay ku kala duwan yihiin uun wax yar. Halkan waa isbarbardhigga amarrada ugu muhiimsan:
Sharaxaad galabnimo Dunnida
Bilow npm gudaha xargaha
Cusboonaysiinta npm rakib -g npm yarn is-cusbooneysiin
Xidhmo xirmo npm rakib
- badbaadi [magac] dun ku dar [magac]
--save-dev [magaca] dunta ku dar
Ku rakib xirmada adduunka npm rakib -g [magac] dun duneed ku dar [magac]
Ku rakib dhammaan baakadaha npm rakib dunta rakib
Cusboonaysii dhammaan baakadaha cusboonaysiinta npm casriyaynta dunta
Ka tirtiro xirmada npm ka saar [magaca] dunta ka saar [magaca]
Yarnku wuxuu ku bilaabmay iyadoo ujeedadu tahay xalinta qaar ka mid daciifnimada npm. Farqiga ugu muuqda waa waxqabadka sare: Iyada oo loo marayo rakibidda kororka, akhriska badan iyo muuqaalka ugu dambeeyay ee dilaaga ' Plug'n'Play (PNP) waxqabadka ayaa si aad ah u kordhaya. Plug'n'Play wuxuu iska tuurayaa fikradda galka node_modules galka ku saleysan mashruuca, tirada feylasha inta badan kori kara ilaa heerka sare ee xiddigiska . Waxaad ka heli kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan tan joornaalka rasmiga ah ee 'Plug'n'Play'. Waxaan ku rakibnaa eslint hal mar npm ka dibna dunta leh keydka oo diirimaad kiis kasta si loo sameeyo farqiga xawaaraha (6x!):